Hay'ad - Magnesium L-Threonate supplements: Faa'iidooyinka, Qiyaasta
Bogga ugu weyn > Kaabis Magnesium L-Threonate
Haddii aad raadineyso wanaag Magnesium L-Threonate dheeri ah, waxaan kugula talineynaa inaad ka iibsato budada Magnesium Threonate Cofttek. Shirkaddu waxay ku andacooneysaa inay kor u qaadeyso bioavailability ee magnesium jirka. Shirkaddu waxay sidoo kale sheeganeysaa in budada ay shirkaddu bixiso ay taageerto waxqabadka xusuusta isla markaana ay kor u qaado guud ahaan shaqada garashada Waxay sidoo kale ka caawiyaan dadka isticmaala inay si fiican u seexdaan. Cofttek waa alaab-qeybiyeyaal Magnesium L-Threonate kuwaas oo kaliya kaa iibin doona si heer sare ah wax soo saarka.
Waa maxay Mag nesium L-threonate?
Maxaa loo adeegsadaa magnesium L Threonate?
Ma fiicni magnesium Threonate?
Miyuu magnesium Glycinate ka fiican yahay mag nesium citrate?
Waa maxay daawooyinka ay tahay inaadan ku qaadanin magnesium?
Miyuu magnesium sameeyaa saxaro?
Immisa mg oo ah magnesium L Threonate waa inaan qaataa?
Magnesiumkee ayaa ugu fiican walaaca?
Magnesium miyay kaa caawin kartaa ceeryaanta maskaxda?
Magnesium miyuu bogsadaa maskaxda?
Miyuu magnesium keenaa waallida?
Magnesium L Threonate miyuu ku fiican yahay cadaadiska dhiigga?
Waa maxay magnesium-ka ugu fiican ee maalin walba la qaato?
Waa maxay farqiga u dhexeeya magnesium citrate iyo magnesium gluconate?
Magnesiumkee ayaa ugu fiican murqaha murqaha?
Magnesiumku miyuu ku fiican yahay walwalka?
Magnesium kee baa ugu fiican hurdada?
Waa maxay cunnooyinka ay ku badan tahay magnesium?
Waa maxay saameynta muddada-dheer ee qaadashada magnesium?
Dhamaan magnesium ma waxay keenaan shuban?
Muddo intee le'eg ayay magnesium L Threonate u qaadanaysaa inay shaqeyso?
Miyuu magnesium keenaa Alzheimers?
Waa maxay astaamaha magnesiumku hooseeyo?
Faytamiin D miyaa kahortagi kartaa cudurka Alzheimers?
Magnesiumkee ayaa ugu fiican dareemayaasha?
Ma fiican tahay in la qaato magnesium subaxa ama habeenkii?
Miyuu Magnesiumku ufiican yahay neerfaha qanjaruufo?
Magnesium ma caawin karaa gariir?
Magnesium ma u fiican yahay cudurka Parkinson?
Waa maxay astaamaha magnesiumku ku yar yahay jirka?
Cirku miyuu caawiyaa cudurka Parkinson?
Maxaa sii xumeeya cudurka Parkinson?
Miyuu magnesium saameyn ku yeeshaa xusuusta?
Magnesium miyay ka caawisaa oksijiinta?
Magnesium miyuu kobciyaa serotonin?
Magnesium ma siisaa tamar?
Waa maxay ugu fiican magnesium L Threonate?
Maxay u fiican tahay magnesium glycinate?
Magnesium Glycinate miyuu la mid yahay magnesium?
Miyuu magnesium Glycinate kaa caawinayaa saxarada?
Waa maxay magnesium glycinate loo isticmaalo in lagu daaweeyo?
Maxay tahay inaadan ku qaadan magnesium?
Goorma ayey tahay inaadan qaadan magnesium?
Sideen ku ogaadaa inaan ku yaraado magnesium?
Muddo intee le'eg ka hor sariirta waa inaan qaataa magnesium?
Waa maxay fiitamiinnada ay tahay inaadan wada qaadan?
Magnesium L Threonate ma u fiicanyahay walaaca?
Noocee magnesium ah ayaa si fiican u nuugaya?
Ma qaadan karaa magnesium muddo dheer?
Sidee ayuu magnesium u saameeyaa dhaqdhaqaaqa mindhicirka?
Immisa jeer maalintii waa inaad qaadataa magnesium?
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo nuugo magnesium?
Maxaan ugu Baahanahay Magnesium L-Threonate?
Waa maxay Magnesium L-threonate Side Effect?
Waa maxay faa'iidooyinka Magnesium L-threonate?
Xagee ka iibsan karaa magnesium L Threonate?
Kalsiyum iyo magnesium miyaa la isla qaadaa ama si gooni ah?
Threonic acid waa iskuxir biyo-milma oo laga helo burburka dheef-shiid kiimikaad ee Vitamin C Marka threonic acid uu ku milmo magnesium, wuxuu sameeyaa milix la yiraahdo Magnesium L-threonate. Magnesium L-threonate si fudud ayuu jirka u nuugaa sidaas awgeed, waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee looga dhigi karo magnesium inay gaarto unugyada maskaxda iyo qaybaha kale ee jirka. Magnesium-ka ay bixiso Magnesium L-threonate wuxuu u adeegaa hawlo badan oo bayoolajiyeed oo muhiim ah, oo ay ku jiraan firfircoonida fiitamiinnada B, dheecaanka insulin, sameynta ATP iyo borotiinka iyo sameynta asiidh dufanka leh Macdanta ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaareysa fududeynta howlaha saxda ah ee dhowr enzym. Tan ugu muhiimsan, waxay kobcineysaa shaqada nidaamka difaaca jirka iyadoo la kordhinayo saameynta anti-viral iyo anti-buro ee unugyada dilaaga dabiiciga ah iyo cytotoxic T-lymphocytes.
Sidii hore loo sheegay, magnesium waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo dhowr cunno oo dabiici ahaan hodan ku ah macdanta. Cunnooyinka qaar ay kujiraan magnesium qadar aad u badan waa shukulaatada madow, avocados, lowska, digiraha, tofu, bocorka iyo abuurka chia, kalluunka dufanka leh, iwm. Si kastaba ha noqotee, magnesiumka oo laga helo ilaha dabiiciga ah badanaa kuma filna in si sax ah loo joogteeyo shaqooyinka kala duwan ee bayoolaji waa, sidaa darteed, baahida loo qabo Magnesium L-threonate supplements ayaa si aad ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Iibsiga Magnesium L-Threonate waxaa loogu talagalay faa'iidooyinka nootropic. Waxay kor u qaadeysaa xusuusta episodic, barashada, iyo xoojinta diiradda. Dheeraadku waa qaddar rijeeto ah oo loogu talo galay bukaannada la il daran xusuusta la xiriirta da'da, ADHD, waallida, iyo cudurka Alzheimers.
hoose ayaa lacagtasee Magnesium L-Threonate waa horumar xagga xusuusta ah. Waxay awood u leedahay inay kor u qaaddo cufnaanta synaptic iyo baaxadda iyo sidoo kale inay kordhiso tirada guud ee goobaha sii deynta neurotransmitter ee maskaxda ku jirta.
Kaabidani waxay sidoo kale awood u leedahay inay hagaajiso xusuusta hawada. Hal daraasad jiir ah, xasuusta shaqada ayaa soo hagaagtay 13% kadib 24 maalmood qaadashada Magneisum L-Threonate. Kadib 30 maalmood oo dheeri ah, jiirka da'da ah waxay awood u yeesheen inay waxqabad la mid ah dhiggooda da'da yar.
Tani waxay ka dhigan tahay in inta kaabadan ay awood u leedahay inay kobciso waxqabadka garashada ee maaddooyinka dhalinyarada iyo kuwa da'da ah, haddana waxay u fiicnaadeen dadka da'da ah. Xaqiiqdii, jiirka da'da ah waxay arkeen heerka hagaajinta ee 19%, taas oo muhiim u ah marka la barbar dhigo 13% horumarinta jiirka da'da yar. Marka la eego in dadka waayeelka ah ay u badan tahay inay ku dhacdo dhibaato xusuusta, kaabiskan wuxuu xanbaarsan yahay saameyn xoog leh oo ku saabsan shakhsiyaadka da'da ah
Magnesium L-threonate wuxuu noqon karaa qaabka ugu fiican ee magnesium adiga haddii aad raadineyso inaad sare u qaado caafimaadka maskaxda gaar ahaan. In kasta oo ay guud ahaan kor u qaadi karto heerarka magnesium-ka ee jirka oo dhan, saameyntu waxay xitaa ka sii xoog badnaan kartaa maskaxda qaabkan magnesium.
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo magnesium ah oo la heli karo, haddana waxaan inta badan door bidnaa inaan isticmaalno magnesium citrate iyo / ama magnesium glycinate. Magnesium citrate wuxuu waxtar badan u leeyahay dadka calool istaagga la ildaran, halka qaabka glycinate uu waxtar badan u leeyahay xaaladaha sida welwelka, hurdo la’aanta, walbahaarka daba dheeraada, iyo xaaladaha caabuqa.
Qaadashada magnesium daawooyinkan waxay sababi kartaa cadaadiska dhiigga inuu aad u hooseeyo. Qaar ka mid ah daawooyinkaas waxaa ka mid ah nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), iyo kuwo kale.
Saxarada Jilicsan: Magnesium wuxuu biyo ku dhaamiyaa mindhicirada, isagoo u shaqeeya sidii calool jilciyaha osmotic. Kordhinta biyaha waxay kicisaa dhaqdhaqaaqa caloosha. Waxay sidoo kale jilcisaa oo kordhisaa xajmiga saxarada, oo kicisa saxaro xanuun waxayna ka caawisaa inay saxaradu sahlanaato in la gudbo.
Magnesium L-threonate waa dawo afka laga qaato waxaana loo qaadan karaa qaab kaniini ah ama budo ah. Qiyaasta saxda ah ee Magnesium L-threonate ama daroogada waxay kuxirantahay da'da iyo caafimaadka qofka qaadanaya iyo waliba ujeedada daawada looqaadayo. Guud ahaan, haweenka da'doodu udhaxeyso 19 iyo 30 waxaa lagula talinayaa inay ku ekaadaan qiyaasta 310 mg maalintii ragga ragga ay isku da'da yihiin waa inay ku ekaadaan xaddiga xaddiga 400 mg maalintii. Ragga waayeelka ah waxay ku kordhin karaan qiyaastooda 420 mg maalintii dumarka naadigaas waa inay u isticmaalaan 360 mg oo ah Magnesium L-threonate maalin kasta natiijooyinka ugu wanaagsan. Haweenka naas nuujinaya ayaa sidoo kale cuni kara daawadan. Si kastaba ha noqotee, waa inay sii wadaan qaadashadooda maalinlaha ah ee Magnesium L-threonate in ka yar 320 mg maalintii.
Haddii aad u qaadaneyso magnesium L-threonate xaalado gaar ah, waa inaad isku hagaajiso qiyaastaada iyadoo lagu saleynayo ujeedada daawada loo qaatay. Tusaale ahaan, haddii aad u qaadatid Magnesium L-threonate arrimaha la xiriira dheef-shiidka, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadatid 400-1200 mg maalin kasta. Haddii aad qaadatid kaabista si kor loogu qaado waxqabadka garashada, waa inaad isticmaashaa 1000 mg oo Magnesium L-threonate maalin kasta. Hurdo wanaagsan, 400-420 mg oo ah magnesium L-threonate ayaa ku filan ragga oo 310 ilaa 360 mg ayaa ku filan haweenka.
Magnesium badanaa waxay ku xiran tahay walxo kale si ay ugu fududaato jirku inuu nuugo. Noocyada kala duwan ee magnesium-ka ayaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo walxaha isku xidha. Noocyada kala duwan ee magnesium-ka waxaa ka mid ah:
Glycinate magnesium. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo murqaha xanuunka.
Xabagta magnesium. Caadi ahaan waxaa loo isticmaali jiray in lagu daaweeyo dhanjafka iyo calool istaagga.
Magnesium citrate. Si fudud jidhku u nuugo oo waliba loo isticmaalo daaweynta calool istaagga.
Kloride magnesium. Si fudud jidhku u nuugo. S
Magnesium sulfate (cusbada Epsom). Guud ahaan, si sahal ah jirku uma nuugo laakiin waxaa laga yaabaa in maqaarka la dhex geliyo.
Caanaha magnesium. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daro cuntada.
Marka loo eego dib-u-eegista 2017 ee daraasadaha, inta badan daraasadaha ku habboon ee ku saabsan magnesium iyo walaaca waxay isticmaalaan magnesium lactate ama magnesium oxide. Magnesium glycinate si fudud ayaa loo nuugaa waxaana laga yaabaa inay leedahay waxyaabo dejiya. Waxay kaa caawin kartaa yareynta walwalka, niyadjabka, walbahaarka, iyo hurdo la'aanta. Hase yeeshe, caddaynta sayniska ee adeegsiyadani way xadidan tahay, sidaa darteed daraasado badan ayaa loo baahan yahay. Magnesium glycinate waxaa badanaa loo isticmaalaa saameynteeda dejinta si loogu daaweeyo walwalka, niyadjabka, iyo hurdo la'aanta.
Caadi ahaan loo yaqaan ceeryaanta maskaxda, garashada gaabiska ah ama dhib ku qabka feejignaanta iyo xusuusta ayaa dhammaantood tilmaami kara yaraanshaha magnesium. Magnesium waa nafaqo muhiim u ah maskaxda, sidaa darteed la'aanteed maskaxdu sidoo kale ma qaban karto.
Magnesium wuxuu u shaqeeyaa sidii iridjoogaha soo dhaweynta NMDA, kuwaas oo ku lug leh koritaanka maskaxda caafimaadka qaba, xusuusta iyo barashada. Waxay ka hortagtaa in unugyada dareemayaasha la siyaadiyo, taas oo dili karta iyaga oo maskaxda u keeni karta dhaawac.
Daraasad cusub oo lagu daabacay joornaalka neerfaha ayaa soo jeedinaysa in heerarka aadka u sareeya iyo kuwa aad u hooseeya ee magnesium-ka ay dadka galin karaan halista ah inuu ku dhaco waallida
Noocaan magnesium wuxuu dhex gali karaa dhiiga wuxuuna ka gudbi karaa caqabada maskaxdaada, waxaa si fudud u nuugi karaa unugyada waxaana la cadeeyay inuu hoos u dhigayo cadaadiska dhiiga isla markaana uu noqon karo ka hortag istaroog sidoo kale.
Magnesium citrate waa mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee magnesium-ka waxaana si fudud looga iibsan karaa internetka ama dukaamada adduunka oo dhan. Cilmi baarisyada qaarkood waxay soo jeedinayaan in noocan uu ka mid yahay noocyada ugu badan ee la heli karo ee magnesium, taasoo la micno ah inay si fudud ugu dhex milmi karto habka dheef-shiidkaaga marka loo eego noocyada kale.
Magnesium citrate wuxuu waxtar badan u leeyahay dadka calool istaagga la ildaran, halka qaabka glycinate uu waxtar badan u leeyahay xaaladaha sida welwelka, hurdo la’aanta, walbahaarka daba dheeraada, iyo xaaladaha caabuqa.
magnesium citrate wuxuu noqon karaa nooca ugu waxtarka badan haddii aad rabto inaad isku daydo kaabis. Haddii magnesiumku kugu yar yahay, waxaa laga yaabaa inay jiraan faa'iidooyin kale oo ka yimaada kordhinta qaadashada nafaqadan. Iyo dawooyin kale ayaa loo heli karaa ciriiriga lugaha oo kaa caawin kara.
Cilmi-baaristu waxay soo jeedineysaa in qaadashada magnesium-ka ee walaaca ay si fiican u shaqeyn karto Daraasaduhu waxay ogaadeen in dareenka cabsida iyo argagaxa ay si weyn u yareyn karto qaadashada weyn ee magnesium, iyo warka wanaagsan ayaa ah in natiijooyinka aysan ku koobnayn cilad-darrada guud ee walwalka.
Magnesium glycinate waxaa badanaa loo isticmaalaa kaabis nafaqo oo gooni ah si loo wanaajiyo hurdada loona daweeyo xaalado kala duwan oo barar, oo ay ku jiraan cudurka wadnaha iyo sonkorowga. Magnesium glycinate si fudud ayaa loo nuugaa waxaana laga yaabaa inay leedahay waxyaabo dejiya. Waxay kaa caawin kartaa yareynta walwalka, niyadjabka, walbahaarka, iyo hurdo la'aanta.
Marka laga reebo qaadashada Magnesium L-threonate si kor loogu qaado heerarka magnesium ee maskaxdaada, waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa cuntooyinka hodanka ku ah macdantan. Cuntooyinkani waxay kaa caawin karaan inaad gaarto heerarka magnesium ee loo baahan yahay maskaxdaada oo aad ku raaxaysato dhammaan faa'iidooyinka macdanta. Waa kuwan qaar ka mid ah Magnesium L-threonate cuntada;
Shukulaatada madow –intii ay macaan tahay oo caafimaad leedahay, waxay qaaddaa 64mg oo magnesium ah oo ah 16% RDI. Marka taa laga reebo, shukulaatada madow sidoo kale waxay hodan ku tahay naxaas, bir, iyo manganese iyo sidoo kale fiber prebiotic.
Avocados– mirahaan dhadhanka iyo nafaqada leh waxay ku siin karaan 58mg oo magnesium ah oo qiyaastii ah 15% RDI. Midhaha ayaa sidoo kale hodan ku ah fiitamiinada B, K, iyo il weyn oo laga helo potassium.
Nutsare – sidoo kale loo yaqaan inuu yahay mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee Magnesium L-threonate. 1-ounce cashews oo u adeega ayaa leh 82mg magnesium taas oo ah 20% of RDI.
Legumessuch– sida digir, misir, digaag, iyo digirta soya ayaa hodan ku ah macdano kala duwan, oo ay ku jiraan magnesium. Tusaale ahaan, hal koob oo digir la kariyey ah waxaa ku jira 120mg oo magnesium ah, waana 30% RDI-ka.
Waxaa sidoo kale jira cunno kale sida Tofu, miraha chia, miraha bocorka, kalluunka dufanka leh, in la xuso in yar. Kala tasho nafaqadaada wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan cuntooyinkan hodan ku ah magnesium-ka.
Magnesium waa nafaqo jirku u baahan yahay si uu caafimaad u helo. Qaadashada Magnesium muddo dheer waxay muhiim u tahay habab badan oo jidhka ah, oo ay ku jiraan nidaaminta muruqyada iyo neerfaha, heerarka sonkorta dhiigga, iyo cadaadiska dhiigga iyo samaynta borotiinka, lafta, iyo DNA.
Noocyada magnesium inta badan la sheego inay sababaan shuban waxaa ka mid ah magnesium carbonate, chloride, gluconate, iyo oxide. Shuban-biyoodka iyo saameynta caloosha jilcisa ee cusbada magnesium waxaa sabab u ah dhaqdhaqaaqa osmotic ee cusbada aan la soo saarin ee ku jirta xiidmaha iyo xiidmaha iyo kicinta dhaqdhaqaaqa caloosha.
MgT afka lagu cunay ayaa la muujiyay inay qaadato ugu yaraan hal bil si kor loogu qaado heerarka maskaxda magnesium illaa xadka looga baahan yahay inuu saameyn ku yeesho sameynta xusuusta.
Haysashada heerarka magnesium-ka oo aad u sarreeya ama aad u hooseeya ayaa halis kuu gelin kara cudurka Alzheimers iyo waallida kale, cilmi-baarayaasha reer Holland ayaa soo wariyay.
Marka heerka magnesium-ka ee jirku hoos uga dhaco sida caadiga ah, astaamaha ayaa soo baxa sababo la xiriira magnesium-ka oo hooseeya. Sababaha ugu badan ee keena magnesium-ka hooseeya waxaa ka mid ah:
Gubashoo saameeya aag weyn oo jirka ah
Shuban joogto ah
Kaadida xad dhaafka ah (polyuria), sida sonkorowga oo aan la xakamayn iyo inta lagu jiro ka soo kabashada kalyaha oo hawl gab ah
Hyperaldosteronism (cilad ku timaadda qanjirka 'adrenal gland') oo si aad ah ugu sii deysa hormoonka aldosterone dhiigga)
Ciladaha tuubada kilyaha
Cilladaha 'Malabsorption syndromes', sida cudurada baruurta iyo cudurada caloosha oo barara
Daawooyinka ay ka mid yihiin amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, proton pump inhibitors, iyo aminoglycoside antibiotics
Qanjirada (barar iyo barar xammeetida)
Tijaabooyinka xayawaanka iyo kuwa ku jira fitamiinada ayaa sheegaya in fitamiin D-ga uu leeyahay awood daaweyn oo looga hortagi karo loona daaweyn karo hoos u dhaca garashada iyo waallida Laba daraasadood oo dhowaan la filayo ayaa sidoo kale soo jeedinaya in heerarka 25 (OH) D ee hooseeya ay kordhiyaan halista hoos u dhaca garashada garashada.
Soo-saaraha ayaa ku andacooday in kaabista magnesium-ka ay ka caawiso la dagaallanka murqaha, hagaajinta tayada hurdada, iyo yareynta welwelka iyo walbahaarka. Waxay sidoo kale sharxayaan in qaabkan magnesium (magnesium bisglycinate) uu ka jilicsan yahay caloosha marka loo eego noocyada kale ee macdanta.
Kaabisyada Magnesium waa la qaadan karaa wakhti kasta oo maalintii ah, illaa intaad awood u leedahay inaad si joogto ah u qaadato. Qaarkood, qaadashada waxyaabaha dheeriga ah subaxa ugu horeysa ayaa sahlanaan kara, halka kuwa kale laga yaabo inay ogaadaan inay ku qaataan iyaga qado ama wax yar ka hor sariirta inay si fiican ugu shaqeyso iyaga.
Magnesium - macdan muhiim u ah caafimaadka nidaamka neerfaha iyo yareynta caabuqa.
Kaabisyada Magnesium (Mg) ayaa lagu muujiyey inay si weyn kor ugu qaadayaan soo kabashada shaqada ee xanuunnada kala duwan ee neerfaha. Faa'iidooyinka lagama maarmaanka u ah kaabista Mg ee cilladaha dareemayaasha durugsan weli lama faahfaahin.
Calaamadaha caanka ah ee yaraanta magnesium-ka waxaa ka mid ah murqaha oo kala baxa, gariir iyo casiraad. Si kastaba ha noqotee, kaabisyaashu uma badna inay yareeyaan astaamahan dadka aan liito.
Daraasadii hore ee cudurka Parkinson waxay heshay foomka Magnesium awood u leh inuu gaaro Maskaxda oo gaabisa hoos u dhaca Gawaarida, Khasaaraha Neuronal
Calaamadaha hore ee magnesiumku hooseeyo waxaa ka mid ah:
Maaddaama yaraanta magnesium-ka ay sii xumaanayso, astaamaha waxaa ka mid noqon kara:
garaaca wadnaha ee aan caadiga ahayn
Daraasad lagu daabacay Daaweynta Tijaabada iyo Daaweynta, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in cowsku ka ilaalin karo nidaamka neerfaha sunta ku lugta leh ee keeneysa xumaanshaha nidaamka neerfaha ee cudurka Parkinson.
Isbedelada daawada, infekshinka, fuuqbaxa, hurdo yaraanta, qalliin dhawaan, diiqad, ama dhibaatooyin kale oo caafimaad ayaa uga sii dari kara astaamaha PD. Infekshannada kaadi mareenka (xitaa astaamaha kaadiheysta la'aanteed) waa sababo gaar ah. TALO: Daawooyinka qaarkood ayaa ka sii dari kara astaamaha PD.
Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa kordhinta qaadashadaada magnesium, macdanta aasaasiga ah ee laga helo khudradda caleenta madow iyo miraha qaarkood, digirta, iyo lowska, ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato la dagaallanka cilladaha xusuusta ee la xiriira gabowga.
Mid ka mid ah doorarkeeda ugu muhiimsan ayaa ah inay gacan ka geysato dhisidda adkeysiga iyadoo la kordhinayo awoodda oksijiinta ee jirka. Laakiin waxay kaloo kaa caawinaysaa: Cadaadiska dhiigga ee caafimaadka qaba.
Cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in ku darista magnesium ay ka caawin karto kordhinta heerarka serotonin. Xaqiiqdii, heerarka hoose ee serotonin ayaa lagu arkay bukaanada qaba yaraanta magnesium. Daraasadda ka wada hadlay kor u qaadista serotonin ee magnesium ayaa soo warisay guul.
Magnesium wuxuu ka ciyaaraa doorar badan oo muhiim ah jirka, sida taageerida shaqada muruqyada iyo neerfaha iyo wax soo saarka tamarta. Heerarka magnesium ee hooseeya ma keenaan astaamo muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, heerarka joogtada ah ee hooseeya wuxuu kordhin karaa halista dhiig karka, cudurka wadnaha, nooca sonkorowga 2 iyo osteoporosis.
Dabeecadaha Xasiloonida Dabiiciga ah.
HADA Cunnooyinka Magnesium Citrate Veg Capsules.
Fiitamiinnada Gummy Vitafusion Magnesium.
Kordhinta Nolosha Neuro-Mag Magneium L-Threonate.
Magtein Magnesium L-Treonate.
Nuugista Sare ee Dhakhtarka ee ugu Fiican 100% Kiniiniyada Magnesium-ka ee Chelated.
Magnesium glycinate waxaa lagu muujiyey inay leedahay waxtarro kala duwan, oo ay ka mid yihiin kuwa soo socda: Waxay leedahay saameyn ay ku qaboojiso maskaxdaada sababtoo ah joogitaanka glycine. Waxay kaa caawin kartaa yareynta walwalka iyo kor u qaadida hurdo fiican. Waxay ka caawisaa inay lafaha xoog yeeshaan adoo ilaalinaya cufnaanta lafaha caafimaad qaba.
Waxaa jira qaabab badan oo magnesium ah oo la heli karo, waxaan inta badan door bidnaa inaan isticmaalno magnesium citrate iyo / ama magnesium glycinate. Foomka loo yaqaan 'Magnesium glycinate' ayaa waxtar badan u leh xaaladaha sida welwelka, hurdo la'aan, diiqad joogto ah, iyo xaalado barar.
Magnesium glycinate waa nooc kale oo weyn oo magnesium ah oo hurdo ah. Waa nooca ugu fiican ee la nuugo ee magnesium, oo jilicsan caloosha, sidaa darteed uma badna inay yeelato saamayn calool jilicsan ama caloosha kaa xanaajisa.
Daawadani waa kaabis macdan ah oo loo isticmaalo kahortagga iyo daaweynta qaddarka hoose ee magnesium ee dhiigga ku jira. Calaamadaha qaarkood ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo astaamaha caloosha oo aad u badan sida calool xanuun, laab jeex, iyo dheefshiidka aashitada.
In kasta oo kaabisyada loo yaqaan 'magnesium supplements' guud ahaan loo arko inay aamin yihiin, waa inaad ka hubisaa daryeel caafimaad bixiyahaaga kahor intaadan qaadan - gaar ahaan haddii aad leedahay xaalad caafimaad. Kaabista macdanta waxay u noqon kartaa mid aan amaan u ahayn dadka qaata dawada qaarkood ee lagu durayo, daawooyinka wadnaha, ama antibiyootikada.
Ka hubi bixiyahaaga daryeelka caafimaadka haddii aad qaadanayso wax daawo ah kahor intaadan qaadan magnesium. Khataraha Dadka qaba sonkorowga, cudurada xiidmaha, cudurada wadnaha ama kilyaha waa inaysan qaadan magnesium kahor inta aysan lahadlin daryeel caafimaad bixiyahooda.
Mid ka mid ah calaamadaha ugu horreeya ee yaraanta magnesiumku badanaa waa daal. Waxaad dareemi kartaa murqaha murqaha, daciifnimada ama qallafsanaanta sidoo kale. Dhimista rabitaanka cuntada iyo lallabbada ayaa ah astaamo kale oo caan ah oo ku jira heerarka hore. Si kastaba ha noqotee, ma ogaan kartid wax calaamado ah bilawga.
Haddii aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho waxyaabaha loo yaqaan 'magnesium supplements' sida gargaarka hurdada, waxaan kugula talineynaa inaad qaadato 1-2 saacadood ka hor intaadan sariirta aadin. Tixgeli inaad ku darto magnesium habkaaga hurdada.
Qiyaaso badan oo macdan ah ayaa ku tartami kara midba midka kale si loo nuugo. Ha u isticmaalin kaalshiyamka, zinc, ama magnesium supplements isla waqti isku mid ah.
Kor u qaadista 'Magnesium L Threonate' waxay hagaajin kartaa niyadda, isku buuqsanaanta, iyo yareynta welwelka. Intaa waxaa sii dheer, warqad kale oo lagu daabacay joornaalka Xanuunka Dhakhtarka ayaa lagu ogaaday in magnesium L-threonate uu ka hortago oo uu ka laabto maqnaanshaha xusuusta ee la xidhiidha xanuunka neuropathic ee joogtada ah.
Noocyada magnesium-ka ee sida fiican ugu milma dareeraha ayaa gebi ahaanba ku dhex milma mindhicirka marka loo eego foomamka aan milmi karin. Daraasado yaryar ayaa lagu ogaaday in magnesium-ka ku jira aspartate, citrate, lactate, iyo chloride foomamka ay si buuxda u nuugaan isla markaana ay ka badan yihiin bioavailable marka loo eego magnesium oxide iyo magnesium sulfate.
Qiyaaso kayar 350 mg mg maalin walba waa u badbaado dadka waaweyn badankood. Dadka qaarkiis, magnesium wuxuu sababi karaa calool xanuun, lallabbo, matag, shuban, iyo waxyeelooyin kale. Marka lagu qaato qaddar aad u tiro badan (in ka badan 350 mg maalintii), magnesium waa SAMAYN LA'AAN.
Magnesium waa macdan muhiim ah oo ku lug leh dhinacyo badan oo caafimaadkaaga ah. Akadeemiyada Qaranka ee Daawada waxay kugula talineysaa inaysan ka badnaan 350 mg oo ah magnesium dheeraad ah maalintii. Iyadoo aan loo eegin inaad u qaadanaysid magnesium si aad u hagaajisid jirkaaga wakhti kasta oo maalintii ah, illaa iyo inta aad awoodid inaad si joogto ah u qaadatid.
yaraynta ama ka fogaanshaha cunnooyinka ay ku badan tahay kaalshiyamka laba saacadood ka hor ama ka dib cunista cuntooyinka ay ku badan tahay magnesium-ku.
ka fogaanshaha daawooyinka zinc-ka ee sarreeya.
daaweynta yaraanta fitamiin D.
cunista khudradda ceyriinka ah halkii aad karsan lahayd.
Magnesium waa macdan muhiim ah jidhkuna wuxuu ku isticmaalaa 300 falcelin dheef-shiid kiimikaad. Sidoo kale waa cunsuriga afraad ee ugu badan jirka aadanaha. Jirku wuxuu u adeegsadaa magnesium nidaaminta cadaadiska dhiigga, foosha murqaha, gudbinta dareemayaasha iyo soosaarka tamarta. Maaddaama magnesium ay tahay macdanta noocan oo kale ah, yaraanteedu waxay u horseedi kartaa cudurro kala duwan, oo ay ka mid yihiin dhanjafka, sonkorowga nooca-2, jahwareerka niyadda iyo cudurrada wadnaha ee kala duwan. In kasta oo macdantaan laga heli karo ilo kala duwan oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin khudaarta, miraha, abuurka iyo digiraha, saddex-meelood laba meel tirada guud ee bulshada ayaa ku dhacda yaraanta. Waa, sidaa darteed, in dadka inta badan lagula taliyo inay cunaan magnesium qaab dheeri ah. Mid ka mid ah magnesium-ka noocan oo kale ah ee soo jiidatay caanka weyn ee dhawaanahan waa Magnesium L-threonate.
Maqaalkan, waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo laga ogyahay Magnesium L-threonate iyo sababta ay tahay inaad u cunto. Marka, aqri.
Baadhitaan la sameeyay ayaa muujinaya in magnesium L-threonate uu amaan yahay oo uu jirka si fiican u dulqaadanayo markii lagu qaato qaddarka xaddiga kayar 350 mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, kordhinta qaadashada Magnesium L-threonate waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo, sida lallabbo, matag, iwm. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah astaamahan, la tasho dhakhtar ama yaree qaddarka qaadashadaada. Magnesium L-threonate, markii la qaato qaddar aad u sarreeya, wuxuu kordhiyaa magnesium dhiska jirka gudahiisa, kaasoo horseedda xaalado ay ka mid yihiin dhiig karka hooseeya, garaaca wadnaha oo kordha, neefsashada oo gaabisa, iwm. Markaa, had iyo goor waxaa fiican inaad takhtarkaaga la tashato ka hor intaadan bilaabin Magnesium L-threonate dheeri ah. Dawadani waxay aamin u tahay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya iyo sidoo kale carruurta marka lagu qaato qadar qaadasho yar.
Aynu eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka Magnesium L-threonate oo aan isku dayno inaan fahanno sababta ay isha magnesium ay ugu raaxeysato caan aad u sarreeya.
① Magnesium L-threonate Si wax ku ool ah ula dagaallama ADHD
Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee caan ka noqoshada Magnesium L-threonate waa awooddeeda lagu hagaajinayo heerarka magnesium ee maskaxda ku jira. Maadaama milixani si fudud jidhku u nuugo, waa hab wax ku ool ah oo magnesium looga dhigo inay gaadho unugyada maskaxda. Magnesium wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kobcinta caafimaadka garashada - waxay awood u leedahay inay bedesho astaamaha gabowga maskaxda, sida ADHD ama feejignaanta cillad yaraanta. Maadaama ADHD ay tahay xaalad qaadata waqti si loo horumariyo, dadku ma oga in ay qabaan ADHD ilaa ay ka gaaraan meel ay ku adkaato wax ka qabashadeeda. Sidaa darteed, Magnesium L-threonate, ayaa door muhiim ah ka ciyaara kobcinta caafimaadka maskaxda, gaar ahaan marka laga hadlayo waayeelka iyo ka fogaynta ADHD. (1). Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
Is Waa Xusuus Cajiib ah iyo Kaabid Kobcinta Garashada
Markay dadku da ’ahaadaan, maskaxdoodu sidoo kale waxay bilaabaysaa inay yaraato cabirka. Tani waxay dhacdaa iyada oo ay ugu wacan tahay luminta sharoobada iyo natiijooyinka hoos u dhaca da'da ee garashada. Daraasado cilmi baaris ah oo la sameeyay sanadihii la soo dhaafay ayaa muujinaya in Magnesium L-threonate ay kordhiso cufnaanta maskaxda ee maskaxda, taas oo iyana horseedaysa xusuusta wanaagsan iyo shaqeynta garashada. Erayada fudud, magnesium-ka oo ay bixiso magnesium L-threonate waxay beddeli kartaa gabowga maskaxda sidaas darteedna waxay kor u qaadaysaa caafimaadka maskaxda, gaar ahaan waayeelka.
③ Waxay kaa caawinaysaa la dagaalanka Niyad jabka iyo walwalka
Niyad jab iyo walaac ayaa noqday dhibaatooyin caadi ah. Jawiga kalsooni darrada ee ay abuurtay cudurka faafa ee COVID-19 ee hadda jira ayaa ka dhigaya arrimahan kuwo inta badan ka badan sidii hore. Daraasaduhu waxay muujiyeen xoogaa xiriir ah oo u dhexeeya magnesium iyo niyad-jabka iyo welwelka. Maaddaama magnesium si toos ah u taabato nidaamka neerfaha, waxay qofka ka dhigi kartaa mid deggan oo xasilloon. Sidaa darteed, magnesium L-threonate waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa yareynta niyadjabka iyo walaaca.
④ Waxay Kordhinaysaa Lafta iyo Caafimaadka Muruqyada
Yaraanta magnesium ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa lafaha daciif ah iyo murqaha iyo sidoo kale muruq xanuun. Sidaa darteed, dadka qaba cudurka osteoporosis waxaa badanaa lagula taliyaa inay qaataan magnesium L-threonate sidii dheeri magnesium ah. Intaa waxaa sii dheer, cusbadan ayaa sidoo kale lagula taliyaa badanaa qalliin xanuun baabi'iya oo ah dawooyinka.
⑤ Magnesium L-Threonate wuxuu dadka ka caawiyaa inay si wanaagsan u seexdaan
Daraasado dhowr ah oo cilmi baaris ah ayaa muujiyey in qofka si fiican u seexdo ay tahay inuu helo qaddarka saxda ah ee magnesium ee jirkiisa. Magnesium wuxuu hawlgaliyaa nidaamka neerfaha ee parasympathetic, kaasoo nasiya jirka oo dhan. Waxaa taas ka sii muhiimsan, magnesium wuxuu ku darsamayaa GABA receptors-ka jirka gudihiisa wuxuuna dejiyaa nidaamka neerfaha qofka, taas oo u oggolaaneysa maskaxda iyo jirku inay dareemaan nasasho. Magnesium L-threonate wuxuu hubiyaa inay jirto magnesium ku filan jirka gudihiisa si loo hubiyo habeen hurdo maqal ah.
Bene Faa'iidooyinka kale
Ka sokow dhammaan faa'iidooyinka aan kor ku soo sheegnay, Magnesium L-threonate waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin kale duwan. Cusbadaani waxaa loo bixiyaa si loo yareeyo xanuunka kadib dhiig bax kadib. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka feeraha ee ay sababaan halbowlayaasha xidhma. Ugu dambeyntiina, cusbadan ayaa sidoo kale la muujiyey inay ka caawiso maqal la'aanta, fibromyalgia iyo sonkorowga. Dadka qaar xitaa waxay u qaataan inay hoos ugu dhigaan heerarka kolestaroolka.
Haddii aad raadineyso inaad ku sii fududaato Magnesium L-threonate supplement, waxaad u baahan tahay alaab-qeybiye la isku halleyn karo oo lagu kalsoon yahay. Haddii aad raadineyso meel aad ku iibsato budada Magnesium L-threonate oo badan, ka dukaamee Cofttek. Shirkadda waxaa lagu yaqaanaa gudaha warshadaha bayoolajiga tijaabooyinkeeda falanqaynta iyo tusaalooyinka tayada cilmi baarista. Cofttek sidoo kale waxay leedahay koox khibrad maamul leh iyo koox heerka koowaad ah R & D oo ay la socdaan khabiiro ka socda adduunka oo idil.
Cofttek waxaa la aasaasay sanadkii 2008 isla markaana dhawr sano gudahood, shirkadu waxay magac u sameysay niches kala duwan, oo ay ka mid yihiin teknoolojiyada synthetic, horumarinta walxaha daroogada, bioengineering, chemistry pharmaceutical, iwm. Maanta, shirkadu waxay macaamiil ku leedahay Waqooyiga Ameerika, Hindiya , Shiinaha iyo Yurub iyo siyaasaddeeda 'Aasaaska Tayada, Macaamiisha Koowaad, Adeegga Daacadda ah, Dheefta Mutual' ayaa ka caawisay inay abuurto macaamiil farxad leh adduunka oo dhan Magnesium L-threonate ee ay bixiso shirkaddu wuxuu ku yimaadaa durbaanno 25 kgs oo shey kasta lagu kalsoonaan karo tayadiisa sare. Marka, haddii aad u baahan tahay budada Magnesium L-threonate ee badan, dukaan ku yaal cofttek.com.
Maaddaama magnesiumku si dhow ula shaqeeyo kalsiyum, waxaa muhiim ah in la helo saamiga habboon ee labada macdanta si ay waxtar u yeeshaan. Xeer wanaagsan oo fiican waa 2: 1 saamiga kaalshiyam-iyo-magnesium. Tusaale ahaan, haddii aad qaadato 1000mg oo kaalshiyam ah, waa inaad sidoo kale qaadataa 500mg oo magnesium ah.
(1). Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Shuruucda cufnaanta qaabdhismeedka iyo shaqeynta ee loo yaqaan 'L-threonate' iyada oo loo marayo wax ka beddelidda isku-uruurinta isku-dhafka magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Waxqabadka Catalase (CAT), ALT iyo AST ee Xubno Kala Duwan oo Switzerland Jiirka ah oo lagu daweeyay Lead Acetate, Vitamin C iyo Magnesium-L-Threonate. Joornaalka Cilmi-baarista Caafimaadka & Baarista, 11 (11).
(3). Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Cunnooyinka daba-dheeraada ee magnesium-L-threonate waxay xawaareysaa baabi'inta waxayna yareysaa soo-kabashada lama-filaanka ah ee ka-noqoshada dhadhanka shuruudaysan. Farmashiyada Bayoolaji iyo Dabeecad, 106, 16-26.
(5).Safarka si loo sahamiyo eg.
(6).Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada.
(7).Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(8).Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(9).Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(10).6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(11).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(12).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13).Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
(14).Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).
Waxay iga dhigtaa inaan ku xanuunsado madaxayga. Waxay isku dayi doontaa inay hoos u dhigto qiyaasta
Waxaan kor u qaaday xasuusta muddada dhow iyo tan fog, waxaana noqdaa mid isku dheelitiran dhinacyo badan. Waxa kale oo aan helayaa korriin yar oo dopamine ah iyo korriin yar oo testosterone ah oo joogteynaysa si isdaba-joog ah oo yar uun yaraysa. Hurdada waa la wanaajin karaa si 7 saacadood ah loo dareemo sida 9 laakiin mag glycinate ayaa wareerisay hadalkaas aniga laakiin wali gadaal ayaan taaganahay, qaar, hurdo kordhinta.
Magnesium L-threonate (MgT) waa nafaqeeye wax ku ool ah oo loogu talagalay hagaajinta shaqada, feejignaanta iyo xusuusta episodic, howlaha garashada ee fulinta, iyo yareynta buuqa iyo welwelka guud.
Dhakhaatiirta qaar waxay ku talinayaan in lagu daro 2000 mg oo Magnesium ah si loola dagaallamo diiqadda.
Taasi waa wax weyn, illaa aan ka gartay in Magnesium L-Threonate ay waxtar badan u leedahay gelitaanka BBB (Dhiig, Maskax, Xannibaad). Tan waxaa lagu cabiray heerarka Magnesium ee dareeraha laf-dhabarka maskaxda. Waxaan u qaataa xusuusta iyo niyadjabka.
Haye! Maqaalkan si ka wanaagsan looma qori karo! Markaan fiiriyo qoraalkan waxa ay i xasuusineysaa saaxiibkeygii hore! Si joogto ah ayuu taas ugu wacdiyey. Waxaan u gudbin doonaa qoraalkan isaga. Aad ayuu u hubaa inuu akhrin fiican yeelan doono. Waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Theonate wuxuu iga caawiyaa inaan hurdo aad u qoto dheer.
Waxaan qaadanayay 600mg oo ah Alpha GPC, 300mg oo ah Uridine, iyo 2,000mg oo ah Mag L-Threonate maadaama hurdadaydu isdabajoogtay dhawaanahan sifiican ayeyna u shaqeyneysay. Waxay iga dhigeysaa 10-25% lulmo badan. Sidoo kale waxaan u seexdaa si ka dhakhso badan markaan tooso habeenkii.
barnaamijyada tiknoolajiyada qalliinka isbitaalka
Xog waxtar leh. Nasiib wanaag, waxaan helay mareegahaaga si aan ula kac ahayn, waxaanan la yaabay sababta uu shilkani u dhici waayay goor hore! waan ku calaamadeeyay
Ku saabsan Magnesium L-Threonate iyadoo la isticmaalayo waqti, 22% subaxnimo iyo 11% habeenkii ayaa si fiican u shaqeeya.
Haddii aan wax badan qaato mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid ka soo horjeedda garashada, waa saameynta ugu fiican ee ay leedahay ka dib 2 toddobaad oo isku xigta badanaana uma isticmaali karo guulo badan oo kaliya waxqabadka kor u qaadista ee kali kali ah.
Waxaan arkaa dad badan oo ka warbixinaya dhibaatooyinka soo raaca sida madax xanuun, hurdo la’aan, tamar hooseysa iwm.
Thiamine waa cofactor for magnesium, iyo qiyaaso badan oo magnesium ah ayaa yareyn kara thiamine, iyo vica-versa.
Iskuday inaad qaadatid daawada 'thiamine' (B-1) ama kadib ama ka dib nafaqooyinkaaga magnesium-ka, oo fiiri haddii waxyeellooyinku wali sii socdaan.
Way fiicantahay, laakiin haddii aad raacdo iyaga wax yar ku bilow. Haddii aad dhibaato ku qabtid hurdo iyo qulqulatid, mag threonate ayaa laga yaabaa inay ka dhigto marka hore. Xitaa kuma bilaabi lahaa qiyaasta bilowga ah ee lagula taliyay dhalada, taas oo ah 1000 mg 2 saacadood ka hor intaadan seexan usbuuca ugu horeeya. Maaddaama tani ay u badan tahay inay weli kugu sii hayn doonto buuq muddo yar.
Waxaan qaataa 1-2gs ka hor sariirta iyo laga yaabee hal 500mg subaxdii haddii aan dareemo cariiri.
Waa wax cajiib ah in aad fikrado ka helayso maqaalkan iyo sidoo kale wada-hadalladayada lagu sameeyay meeshan.
Magnesium L-Threonate wuxuu sababaa qulqulka magnesium ee ka soo baxa bannaanka dheeriga ah una soo baxa meesha xididdada xididdada ku leh. Tani kuma dhaceyso cusbada kale ee magnesium-ka.
Way ku caawin kartaa inaad si dhakhso leh u seexato sidaa darteed 1 saac ka hor sariirta ayaa lagula talinayaa. Dhaladaada dheeriga ah waxay u egtahay inay u baahan tahay 3 ama 4 kaniini maalintii. Tani waa sababta oo ah magnesium threonate waa mid weyn, qaybta treonate ee maaddooyinka waa weyn yahay. U kala qaad qiyaasta maalintii si aad u badiso nuugista laakiin waxa laga yaabaa inaad jadwal u samayso si aad u yeelato qaadashada ka dib cuntadaadii ugu dambaysay.
L-Threonate wuxuu si toos ah u saameeyaa maskaxda si ka duwan noocyada kale ee magnesium.
Maaddaama ay la socoto waxyaabo badan oo si toos ah saameyn ugu leh maskaxda waxaa laga yaabaa in muddo la qabsado iyada marka id ayaa waqti siisa.
Waa maxay waxa dhan, waxa ku jira mareegtan runtii waa wax cajiib ah oo dadka aqoonta u leh, si fiican, sii wad asxaabta shaqada wanaagsan.
Nasashadaas oo lagu daray kicinta dusha sare ee hurdo la’aanta hadda jirta ee aad la kulmi karto. Kaliya ku qaado subaxa hore iyo qadar dhexdhexaad-dhexdhexaad ah laga bilaabo hadda.
Ilaa inta Mag-L-Threonate tagto, fahamkaygu wuxuu yahay in L-threonate uu yahay gudbiye sare isla markaana fududeynaya tiro badan oo magnesium ah si toos ah maskaxda halkaas oo looga faa'iideysan karo neerfayaasha? Daraasado loo malaynayo inay muujiyeen inay taasi run tahay. Ma aqaano inay taasi tahay buun buunin iyo in kale. Waxaan doorbidi lahaa inaan qaato L-threonate haddii aan ku heli karo jumlad ahaan, haddii kale waxaan kaliya ku dhajinayaa shaashadda.
Waxay u badan tahay 2 garaam oo magnesium L-threonate ah, oo dhaliya 144mg oo ah magnesium aasaasi ah.
Foomka Threonate waa mid maskax gaar ah leh oo laga yaabo inuu aad uga waxtar badan yahay kor u qaadista maadada maskaxda ee magnesium inkasta oo uu ku jiro magnesium dhab ah oo ku jira.
Waxaan bilaabay qaadashada wax soo saarka Magnesium L-Threonate habeenkii sariirta ka hor iyo wow - ka dib afar ama shan maalmood ka dib waxaan bilaabay inaan ogaado horumarin yar oo ku saabsan xusuusinta, ku haynta xogta kala duwan shaqada, ka dib dhowr toddobaad ka dib, horumarinno waaweyn oo aan ku xasuusan karo magacyo iyo xaqiiqooyin laga bilaabo sanado kahor. Kahor intaadan sidan, waxaan la halgamay xusuusinta fudud ee waxyaalaha yar yar iyo kuwa waaweynba waxayna ahayd mid igu filan markaan lahadlay takhtarkayga PCP-ga xitaa waxaan arkay dhakhtarka neerfaha oo igu ogaadey cillad garasho "khafiif ah" oo xitaa aaday ilaa iyo intaan dhammeystiro lambar imtixaanada si meesha looga saaro cudurka Alzheimers.
Waxaan qaadanayaa qiyaasta lagu taliyey ee saddex kaabsoosha ah oo bixisa 144 mg ee Magnesium L-Threonate habeenkii. Tani waxay ii noqotay noloshii isbedelay.
Mid ka mid ah saamaynta togan ee dhinaca ayaa ah tan waxay umuuqataa inay hagaajisay hurdadayda waxaanan inta badan xusuustaa riyadayda hadda.
Waxaan qaadanayay budada Magnesium L-Threonate qiyaastii 10 bilood hadda, 1.0 - 1.2g maalin kasta. Waxaan u isticmaalaa sidii caawimaad hurdo, waxayna u shaqaysaa si yaab leh. Ma dhihi karo waxaan dareemay wax saameyn ah oo ka baxsan taas.
Magnesium L-threonate waa wax cajiib ah. Waad ka furan kartaa google magaceeda Magtein. Waxay nadiifisaa ceeryaanta maskaxda, waxay yareysaa walwalka, waxay kaa caawineysaa inaad hurudo, waxay kaa dhigeysaa mid caqli badan, waxayna kaa caawineysaa niyadjabka. Waalidkay waxay labadoodaba awood u yeesheen inay ka baxaan dawooyinka lidka ku ah niyadjabka iyaga oo u wareegay Magtein. Waxaan u isticmaalaa maalin kasta mana ahaan laheyn la'aanteed.
1g-2g hal saac ka hor hurdada. 500mg maalintii oo la isticmaalo, haddii loo baahdo walaac. Waa mid ka mid ah walxaha runti kugu dhufta mar haddii ay xirto, taas oo macnaheedu yahay inaysan wax weyn u ahayn wax soo saar inta ay ku jirto laakiin ay maskaxdaada nasato oo ay u oggolaato daroogooyinka saameynaya soo-dhoweeyaasha ay xannibayaan inay si fiican u shaqeeyaan marka Mg uu horay u qabtay waa shaqo. Taasi macno ma samaynaysaa? Taasi waa sababta ka hor sariirta ay aad u weyn tahay, waxaad u kacdaa inaad maskaxdaada ka siiso nasasho kicinta. Saameyntu waa isugeyn, laakiin waa nacalad, runtii waxaan dareemay kala duwanaansho subaxaas kadib markii aan qaatay, runti.
Magnesium aad u badan ayaa sababi doona saxaro dabacsan. Inteena ugu badan, taasi waxay ka badan tahay 200 mg maalintii. Dadka qaarkiis waxay u dulqaadan karaan in ka badan 500 mg oo magnesium ah oo dheeri ah oo aan dhibaato lahayn.
Qiyaasta la igu taliyay ee aniga waa 144 mg oo ah (nadiif) magnesium maalintii. Dadka qaarkiis hurdo yar ayey ku bilowdaan bilowga, qaar kalena waxay dareemaan dareemo siyaado ah oo socodka dhiigga ee madaxa, halka kuwa kale laga yaabo inay yeeshaan madax-xanuun fudud. T Haddii aad u qaadanaysid magnesium calool istaagga, waxaad u baahan kartaa inaad isku daydo inaad sii wadato qiyaastaada hadda adiga oo ku daraya Mg Threonate.
Haddii aad yeelato saxaro dabacsan, iska yaree foomkaagii hore ee Mg.
Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyo!
Magnesium L-Threonate - waa maxay khibradaadu?
Ma jiraa qof halkan ku qaadanaya Magnesium L-Threonate kaab ahaan? Maxay ahayd khibradaadu?
Mudo intee leeg ayaad qaadaneysay iyo intee?
Sidee ahayd kahor intaadan bilaabin qaadashadiisa, intaad dul saarneyd, iyo kadib markaad joojisay qaadashadeeda haddii aad qaadatay?
Waxaan u maleynayaa in maamulka goobtan uu si dhab ah u shaqeynayo si uu u taageero boggiisa internetka, sababtoo ah halkan wax kastaa waa xog tayo leh.
Waxaan ogaadey in Magnesium L-threonate uu yahay mid badan oo qabow iyo saameyn maskaxeed diirada saaraya, halka glycinate ay ka badan tahay nasashada jirka.
U qalantaa isku dayga labadaba fekerkeyga.
Threonate oo ku jira qaabka amino-acid ayaa la muujiyey inuu u dhaqmo sidii daawada loo yaqaan 'Acetylcholinesterase inhibitor'. Markaa haddii aad xasaasi tahay oo aad dareento xaalad niyad jab ah ama saameyn kasta oo xun oo ka timaadda nafaqada sida Huperzine A, Alpha GPC, mega-doses of oil oil, ka dib waan ka xishoon doonaa dhinaca Mag Glycinate.
Kharajka awgiis, waxaan joojiyay isku dayga magnesium l-threonate sanado.
laakiin aniga ahaan, Waxay hagaajineysaa hurdadeyda, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in heerka xasilinta ee aan ku guuleysan karo maalinta kadib qaadashadeeda aan la barbardhigi karin.
Marnaba kama helin wax niyadda / walaaca ah ee ka imanaya noocyada kale ee magnesium sida glycinate, laakiin shaqsiyan waxaan ka helaa l-threonate.
Magnesium L-threonate wuxuu noqon karaa qaabka kuugu fiican ee magnesium haddii aad rabto inaad sare u qaado caafimaadka maskaxda gaar ahaan.
In kasta oo ay guud ahaan kor u qaadi karto heerarka magnesium-ka ee jirka oo dhan, haddana saamaynta ayaa xitaa ka sii xoog badnaan karta maskaxda.
Waxyaabahani waxay u shaqeeyaan, gaar ahaan muddada hurdada iyo tayada.
Waxaan isku dayay noocyo kale oo Mg ah waxayna isiinayaan orodka.
Waxaan qaatay Melatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, midkoodna uma shaqeeyo si joogto ah oo wax ku ool ah sida L-Threonate ee Mg.
Waaya-aragnimada Magnesium L-Threonate?
Waxaan dhawaan iibsaday qaar ka mid ah Magnesium L-Threonate waxbana kuma lihin laakiin waaya-aragnimooyin waaweyn oo aan ku soo qaatay. Walaac yar, ceeryaamo maskaxeed oo yaraata, waxaan dareemayaa sida 'naftayda' macno ahaan, iwm. Waxaan qiyaasayaa qiyaastii 1-1.5g tan maalin kasta.
Waxaan la yaabanahay haddii qof uu waayo-aragnimo la mid ah ama mid ka duwan ku yeeshay qaabkan Magnesium?
Magnesium L-Threonate wuxuu iga dhigaa mid dabacsan oo hurdo iga caawiya.
KA FURO LABEL TIJAABADA MAGNESIUM L-THREONATE EE BUKAANKA CUDURKA KA LEH
Dalka Mareykanka, waxaa lagu qiyaasaa 5.2 milyan oo kiis oo ah Cudurka Alzheimers (AD), iyada oo AD iyo waallida kale ay saameyneyso ku dhowaad 1 ka mid ah 3 da ’waayeelka ah. Iyada oo ay sii kordheyso culeyska dhaqaale iyo shucuureed ee daryeelka bukaanka, helitaanka daaweyn badbaado leh oo waxtar leh ayaa muhiim ah. Daraasad soo ifbaxeysa oo ku saabsan saameynta garashada ee Magnesium L-Threonate (MGT) waxay soo jeedineysaa in kaabista ay ka faa'iideysan karto shaqsiyaadka qaba AD. In kasta oo ay xaddidan tahay, jiritaanka xoolaha jira iyo xogta tijaabada caafimaad ee la xiriirta natiijooyinka neerfaha iyo garashada ka dib markii la kordhiyay MGT, sharraxaad farsamo ee saameynta MGT ayaa bilaabeysa inay soo baxdo, oo ay ku jiraan hagaajinta waddooyinka calaamadaha NMDAR. Tijaabinta calaamadda furan ee hadda socota ayaa sahamisay saameynta isticmaalka MGT ee bukaannada qaba waallida fudud ama dhexdhexaad ah. Shan iyo toban bukaan ah ayaa maray 18F-FDG-PET imaging, baaritaanka garashada, iyo dhiigga oo laga soo qaado asalka iyo 12 toddobaadyada daaweynta si loo qiimeeyo saameynta ba'an ee MGT ee ku-daweynta hippocampal iyo kiliyaha hore ee dhexdhexaadka ah ee garashada garashada oo ay ku jiraan howlaha fulinta, feejignaanta, xawaaraha hawsha , Aftahanimada hadalka iyo xusuusta. Baadhitaanka garashada iyo dhiig qaadista ayaa sidoo kale la sameeyay kadib 8 todobaad oo ah joojinta MGT. Natiijooyinku waxay muujiyeen horumar la taaban karo oo ku saabsan dheef-shiid kiimikaadka maskaxda ee gobolka oo ay weheliso hagaajinta heerka caalamiga ah ee garashada garashada ee wadarta saamiga ka dib toddobaadyada 12 ee daaweynta MGT. Kordhinta heerarka unugyada dhiigga cas ee magnesium-ka ayaa lala xiriiriyay hagaajinta guud ahaan garashada iyo fulinta fulinta qaar ka mid ah laakiin aan ahayn dhammaan bukaannada. Tijaabooyinka bukaan-eegtada ee xakamaynta weyn ee placebo ayaa loo dammaanad qaaday si loo qiimeeyo MGT inay tahay mid wax ku ool ah, si fudud loo heli karo, iyo daaweyn la awoodi karo oo loogu talagalay dadka qaba AD.
Wax-ku-oolnimada iyo Badbaadada MMFS-01, oo loo yaqaan 'Synapse Density Enhancer', oo lagu daaweynayo naafanimada garashada ee dadka waayeelka ah: Waa la kala soocay, laba-indhoole ah, tijaabinta goobbo-kontorool ah
Aad bay dhib la'aan u tahay inaad ka ogaato arrin kasta oo ku jirta shabakadda marka la barbar dhigo buugaagta, sida aan maqaalkan ka helay mareegahan.
Cajiib! Xaqiiqdii maqaalkeedii cajiibka ahaa, waxaan ka helay fikrad aad u cad oo ku saabsan qodobkaan.
Magtein (L-threonate) Su'aasha Qiyaasta？
Waa salaaman tahay, waxaan la yaabanahay dadka isticmaalay Magtein ama L-threonate waqtiyadii la soo dhaafay, waxa ay qaadashadoodu ahaayeen maalin kasta, gaar ahaan haddii ay isku wareegaan noocyada kale ee magnesium.
Hadda, waxaan qaataa ~ 3600mg oo glycinate ah maalintii (1800mg subaxdii, 1800mg habeenkii). Marka loo eego calaamadda, taasi waxay ka badan tahay 100% qiimaha maalinlaha ah ee magnesium, laakiin taasi waa qiyaasta aan ku dareemayo wanaag, maadaama ay baabi'ineyso inta badan murqaha iyo murqaha.
Waxaan sidoo kale la yaabanahay, maadaama 2000mg Magtein uu yahay oo kaliya 36% qiimaha magnesium maalin kasta, iyo 2000mg Magtein waa MAXIMUM lagu taliyaa maalintii, suurta gal ma tahay in la helo magnesium ku filan oo kaliya L-threonate, mise dadku waxay isticmaalaan noocyo kale oo magnesium ah lagu daro L-threonate, markaad qaadaneyso L-threonate?
Waad ku mahadsantahay caawimada. Markii ugu horraysay aniga oo isku dayaya L-threonate.
Waxaan qaadanayay budada ND ee 'Magnesium L-Threonate' qiyaastii 10 bilood hadda, 1.0 - 1.2g maalin kasta. Waxaan u isticmaalaa sidii caawimaad hurdo, waxayna u shaqaysaa si yaab leh. Ma dhihi karo waxaan dareemay wax saameyn ah oo ka baxsan taas.
Isha Naturals Magnesium L Threonate? Magnesium L Theronate waa la ruqseeyay si haddii ay tahay Mag dhab ah. Waxay noqon doontaa isla qaacido la mid ah iyadoon loo eegin sumadda iibinaysa.
Magnesium ma ku jirtaa?
Ilaa intaan ogahay, l-threonate waa qaab dhiirrigeliya neurotransmission si loo caddeeyo iyo diiradda. Glycinate ee murqaha / casiraad muruqyada iyo xakameynta cadaadiska dhiigga. Citrate si aad u dejiso oo waxay kaa caawin kartaa joogtaynta.
Waxaan heli doonaa citrate calaamadaha aad sharaxday.
Magnesium waa electrolyte muhiim u ah jirkaaga markaa ku dhex gal maalin kasta.